Windows7ကိုအောကျတှငျအသုံးဝင်သောဖြတ်လမ်း
အတော်လေးမကြာခဏအသုံးပြုသူများတယောက်ကိုတယောက်ကို PC ကနေဒေတာတွေကိုလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြသည်။ ဘယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတတ်နိုင်နှင့်ရိုးစင်းသောနည်းလမ်းများရှိသနညျး အများအပြားကရွေးချယ်စရာဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတစ်ဦးကွန်ပျူတာကနေဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းတယောက်ကိုတယောက်ကို PC ကနေဒေတာတွေကိုလွှဲပြောင်းအများအပြားနည်းလမ်းများရှိပါသည်။
အခုတော့ operating system ကို Windows က 10 ဖြစ်ပါတယ် Microsoft ကကနေနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကအသုံးပြုသူများကိုတက်ကြွစွာဆောအဟောင်းကနေပြောင်းရွှေ့ရှေ့မှာ updated နေကြသည်။ သို့သျောလညျးမဟုတျဘဲအစဉ်မပြတ်ပြန်လည် install ပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ချောချောမွေ့မွေ့ပြေး - မကြာခဏင်း၏သင်တန်းအတွက်အမှား၏ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အခါတစ်ဦးပျက်ကွက်အသုံးပြုသူချက်ချင်းသူမကိုရှင်းပြချက်, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးကုဒ်နှင့်အတူတစ်အကြောင်းကြားစာလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Windows7နဲ့ Windows XP ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် 0x000000A5 အမှားရပ်တန့်
သင်က Windows XP ကို ​​install လုပ်သည့်အခါထက် Windows7တွင်သေမင်း၏အပြာရောင် screen ပေါ်မှာပေါ်လာ 0x000000A5 ကုဒ်တွေနဲ့မှားယွင်းနေသည်ကအခြားအကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါတယ်။ ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာကြှနျုပျတို့သညျဤအမှား၏ဖယ်ရှားပစ်ရမည်ကဲ့သို့မှာ, ဤအတွက်နှင့်အခြားအမှု၌ကြည့်ရှုမည်။ ပထမဦးစွာသင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒါမှမဟုတ် hibernation mode ကို (အိပ်ပျော်ခြင်း) ၏ထွက်လာမယ့်ပြီးနောက်လှည့်သောအခါမှာ Windows 7, သုံးနေတယ်ဆိုလျှင်, သင်သည်သေမင်း၏အပြာရောင် screen နဲ့သတင်းစကား 0X000000A5 ကုဒ်တွေ့မြင်ရဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။
Windows XP မှာဝေးလံခေါင်သီကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ခြင်း
အခန်း, အဆောက်အအုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ယက်ကိုအရပ်၌မဆိုရာအရပျ - ဝေးလံသောဆက်သွယ်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ကိုသည်အခြားနေရာများတွင်ကွန်ပျူတာများမှ access ကိုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ဤသည်ဆက်သွယ်မှုသင်သည်သင်၏ဖိုင်တွေ, ပရိုဂရမ်နှင့် operating system setting များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ Next ကိုကျနော်တို့က Windows XP ကိုအတူကွန်ပျူတာပေါ်မှာဝေးလံခေါင်သီ access ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
မြင်ကွင်းက USB-devices များနှင့်အတူ Windows7ကိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်း
ယနေ့တွင်ကို USB သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများအကြားအချက်အလက်လွှဲပြောင်းဘို့အသုံးအများဆုံး protocol များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ စနစ်သင့်လျော်သော connector ကိုဟင်းချိုချိတ်ဆက်မမြင်ရပါဘူးတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်အလွန်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ USB ကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်သို့မဟုတ်မောက်နှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်လျှင်အထူးသဖြင့်ပြဿနာတွေအများကြီးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Windows7ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တစ်ဦးက ISO image ကိုဖွင့်
ISO ကိုပု optical disc ကိုဒါဖိုင်ကို၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ CD ကိုတစ်ဦးကို virtual မိတ္တူတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြဿနာ windose7၌ဤမျိုး၏အဆောက်အဦကို run ရန်မအထူး tools များဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အကယ်. သင် OS အတွက် ISO ကိုရဲ့ contents play နိုငျသောအားဖြင့်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
Windows တွင်ကီးဘုတ်နှင့်အတူ mouse ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်လို
သငျသညျရုတ်တရက်မောက်အလုပ်လုပ်ရပ်တန့်ကြပါလျှင်, Window 10, 8 နဲ့ Windows7ကိုကီးဘုတ်နှင့်အတူ mouse ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်မလိုအပ်ပါကြောင်းဆိုအပိုဆောင်းအစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေး, လိုအပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာစနစ်များတွင်လက်ရှိဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ကီးဘုတ်နှင့်အတူ mouse ကိုထိန်းချုပ်ဖို့တယောက်လိုအပ်ချက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်: သင်သည်လက်ျာအပေါ်သီးခြားဂဏန်းခလုတ်နဲ့ကီးဘုတ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာ (လက်ပ်တော့) ဖို့ disc ကိုကနေ Windows7ကို install လုပ်သလော
ကြိုဆိုပါတယ်! ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာပထမဦးဆုံးဆောင်းပါးသည်နှင့်ငါ 7. ထင်ရသော unsinkable Windows XP ကို၏ခေတ်ကို Windows (လျှော့ရိုးရိုး OS ကိုရည်ညွှန်း) က Operating System ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရည်စူးအသုံးပြုသူများ၏ 50% ခနျ့နေဆဲနေဆဲဒီကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း (အဆုံးသတ်မှကြွလာ OS က) နှင့်အရှင်အသစ်တစ်ခုခေတ် - Window7၏ခေတ်။
Windows7ကို "Desktop ကို" တွင်နောက်ခံကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို
စံချွေတာပျင်းရ windose ။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူသင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ပုံဖို့အတွက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအင်တာနက်ကိုမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ် image ကိုဖွစျစနေိုနှင့်ပင်ရုပ်ပုံများကိုတိုင်းစက္ကန့်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်မိနစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာဆလိုက်ရှိုးစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့က screen ပေါ်မှာလှပသောကြည့်ရှုနိုင်အောင်, သာ high-resolution ပုံရိပ်များကိုတက် Pick ။
ဒီလက်စွဲခုနှစ်တွင်စတင်ဘို့ - ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားပေးသော DirectX ကိုထွက်ရှာရန်, သို့မဟုတ်အစား - ထို့နောက် DirectX ကို၏ထားတဲ့ဗားရှင်းထွက်ရှာသင်၏ Windows system ပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်းကိုလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်လည်းမဆိုဂိမ်းသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကို run မရရှိလျှင်ပိုကောင်းသွားခဲ့ရာနားလည်ရန်ကူညီပေးပါမည်သည့်အတွက် Windows 10, 8 နဲ့ Windows7မှာ DirectX ကိုဗားရှင်း, နှင့် ပတ်သက်. အပိုဆောင်း Non-သိသာသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်ရှိရာဗားရှင်းအခြေအနေတွေမှာ, စစ်ဆေးနေသင်မြင်ဖို့မြျှောလငျ့ကွောငျးတစျခုကနေမတူညီတဲ့အခါသင်တို့ကိုတွေ့မြင်။
ကို DLNA Windows 10 ကို Server ကို
ဘယ်လိုတီဗီနှင့်အခြား devices များ built-in system ပေါ်တွင်မီဒီယာထုတ်လွှင့် streaming များအတွက်, ဒါမှမဟုတ် Third-party အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကတဆင့် Windows 10 ကိုတစ်ဦးကို DLNA server ကိုဖန်တီးရန်ဤညွှန်ကြားချက်အသေးစိတ်။ လည်းညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲသင်၏ PC ဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုကနေ content တွေကိုဆော့ကစားရန်အ function ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်း။
လြှို့ဝှကျ Windows 10 ကိုအခွင့်အလမ်း
Operating system က Windows 10 ပွင့်လင်းစမ်းသပ် mode မှာဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ မည်သူမဆိုဒီထုတ်ကုန်သူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ခုခုယူဆောင်လာနိုင်ဘူး။ ဒါဟာ OS ကိုအများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ features နဲ့အသစ် fangled "ချစ်ပ် 'တယ်တော်မူကြောင်းကိုအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လုံးဝအသစ်သောအရာတစ်ခုခု - ဤတိုးတက်မှုအချို့တို့သည်အချိန်သက်သေပြအစီအစဉ်များ, အခြားဖြစ်ကြသည်။
ကွန်ပျူတာကနေ password ကို Remove
တိုင်းအတွက် Windows အသုံးပြုသူကွန်ပျူတာကနေစကားဝှက်ကိုဖယ်ရှား, ဒါပေမယ့်နေဆဲတန်ဖိုးရှိတစ်ဦး Pre-ထင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ PC ကိုအခြားသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်လျှင်, သူကအမျိုးအစားမဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်, မလိုအပ်ပါဘူးပါဘူး။ သင်သာအလုပ်လုပ်နေကြလျှင်, ထိုကဲ့သို့လုံခြုံရေးအစီအမံကနေသူ့ကိုသက်ညှာနိုင်ပါသည်။
Windows 10 ကိုအတွက်ကျိုး button ကို "Start ကို" နဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်း
Windows 10 ကို developer များလျင်မြန်စွာအပေါငျးတို့သအားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ပြီးအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ သို့သော်အသုံးပြုသူများအဆဲ operating system ကိုအတွက်ပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရပေမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ခလုတ်စစ်ဆင်ရေးအမှား "Start" ။ ဒီအမှားပြင်ပေးဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်မှာ Windows 10 မှာ Non-အလုပ်လုပ်ကိုင် "Start ကို" ခလုတ်ကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်း။
ကျနော်တို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် Windows7ကိုဒေါင်းလုပ်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး
၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများ, ယာဉ်မောင်းနှင့် software ကိုခြိနျးတှေ့မှတက်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီရန်အ operating system ကိုပုံမှန်မွမ်းမံမှုများ။ သငျသညျကို Windows ဆက်ကြောင်းအတွက် updates များကို install လုပ်သည့်အခါတခါတရံမက်ဆေ့ခ်ျများမှားယှငျးမှသာဦးဆောင်ပေါ်ပေါက်, ဒါပေမယ့်လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတစ်ဦးပြည့်စုံအရှုံး။ ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့လာမယ့် update ကိုစနစ်က boot လုပ်ဖို့ငြင်းဆန်ပြီးနောက်အဘယ်မှာရှိအခွအေနေလုပျဆောငျဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
Windows7ကိုဒေါင်းလုပ်အတူပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
ကွန်ပျူတာဖွစျနိုငျကွောငျးအကြီးမားဆုံးဒုက္ခတစ်ခုမှာတစ်ခုကို run နေအတူပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအပြစ်ရှာနေတဲ့ running တဲ့ operating system ပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ပါလျှင် ပို. ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများသည်ကတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ PC မှာ run မပါဘူးဆိုရင်, များစွာသောလူရိုးရှင်းစွာတစ်ဦး stupor ထဲသို့ပြုတ်ကျဘာလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါ။
Windows 10 ကိုအတွင်းပျောက်ဆုံး mouse ကို cursor နဲ့ပြဿနာ fix
Mouse - ပင်မကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှု device ကို။ ကျရှုံးခြင်း၏အမှု၌အသုံးပြုသူတစ်ဦးကို PC များအသုံးပြုမှုအတွက်လေးနက်သောအခက်အခဲများတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ အဆိုပါလက်တော့တွင်, သင်တစ်ဦး touchpad ကိုတစ်ဦး Analog စနှုနျးနိုငျသျောလညျးအဘယျသို့ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေ၌ပြုပါရန်, Desktop ကွန်ပျူတာများ၏ပိုင်ရှင်များ? ဒီအသင်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်ပြီးဤဆောင်းပါးကိုထံမှသင်ယူကြသည်။
Windows တွင် ProgramData folder ကို
စနစ် drive ပေါ်တွင် Windows 10 ကို, 8 နဲ့ Windows7မှာတော့အများအားဖြင့်ရှိ ProgramData ဖိုင်တွဲ, ဤဖိုင်တွဲအသုံးပြုသူများကိုကျော်ကို C မောင်းကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုရှိသည်: folder ကို၏အဘယ်မှာရှိ ProgramData ဖိုင်တွဲဖြစ်ပါသည်, အဘယ်အရာကိုမျိုးကို (နှင့်အဘယ်ကြောင့်ရုတ်တရက် disc ကိုပျေါမှာထငျရှား ), ကကဘာလဲဆိုတာအဘို့နှင့်အဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ။ ဒီပစ္စည်းအတွက်ငါက၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တတ်နိုင်သမျှအရေးယူရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်သောဤကိစ္စများနှင့် ProgramData ဖိုင်တွဲအကြောင်းကိုနောက်ထပ်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးချင်းစီမှ, အသေးစိတျအဖြေကို။
Windows 10 ကိုတစ်ခုစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုဖျက်ခြင်း
စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်ထူးရှိရမည်အမြဲတမ်းကို Windows ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအကောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ကြောင်းက Windows 95 လကျထကျကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သောဒေသခံ, နှင့်အွန်လိုင်းအကောင့်: ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျနော်တို့လည်ပတ်မှုစနစ်၏အင်္ဂါရပ်များစီမံအုပ်ချုပ်သူတစ်ဦးက disable သင့်တယ်ဘယ်လို operating system ကို Windows က 10 တခုတခုအပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲသူအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်မည်သို့ရှင်းပြမည်, မိုက်ကရိုဆော့ဖ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနှစ်ခုအကောင့်အသစ်များ၏အမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည် ဒါဟာ "သောင်းချီ" ၏တီထွင်မှုများ၏တဦးတည်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
Windows7performance အကဲဖြတ်
Rate မြန်နှုန်း Vindovs7အထူးအညွှန်းကိန်းစွမ်းဆောင်ရည်အားဖွငျ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတိုင်းတာခြင်းဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုထုတ်လုပ်အထူးစကေးပေါ်တွင် operating system ကိုတစ် generalized အကဲဖြတ်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows 7, ဒီ parameter သည် 1.0 ကနေ 7.9 မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ရမှတ်မြင့်မား, ပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးတည်ငြိမ်ခက်ခဲပြီးရှုပ်ထွေးစစ်ဆင်ရေးထွက်တင်ဆောင်လာသောအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအရာသင့်ကွန်ပျူတာကို run ပါလိမ့်မယ်။